Nice - idolobha elidumile lase-French Riviera, elinomlando ocebile, oneminyaka eminyaka ubudala. Izivakashi ziza lapha nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ehlobo bajabulela amabhishi ashisayo, futhi ebusika kulindeleke ukuthi kube khona amapulangwe ase-Alps eningizimu. Naphezu kokubheka ukuthi i-Nice idolobha lokuzithabisa okungenalutho, lokhu akukude neze. Izindawo lapho ungajoyina ezokungcebeleka ngokomoya nezamasiko akuzona ngaphansi. Phakathi kwezinto zaseNice eFrance, ngibonisa ngesibindi iminyuziyamu, amakhishobhi, amasonto, amapaki namakhosikazi.
Izinto ezinkulu zedolobha laseNice
I-Marc Chagall Museum e-Nice
I-Museum kaMarc Chagall ayinayo kuphela ukuveza okuvela emjikelezweni ogcwele wemisebenzi yenkosi. Ingxenye yendawo yangaphakathi yadalwa nguChagall ikakhulukazi kule museum. Ngakho-ke, umculi owaziwa emhlabeni wonke, wadala ingilazi kanye ne-mosaic, ebeka ehholo lekhonsathi.
Isivakashi ngasinye sinethuba eliyingqayizivele lokubuka ngokuningiliziwe lonke uchungechunge lwezingcingo ezivela kumjikelezo othi "The Message Bible". Ngaphandle kokwaziswa okubonakalayo nomsebenzi kaMarc Chagall, izivakashi zingahamba eduze nepaki eseduze neyamamyuziyamu.
I-Matisse Museum e-Nice
Ukudala komdali oyedwa, u-Henri Matisse, umelwe emnyuziyamu wegama elifanayo e-Nice. Isinqumo sokuvula uMyuziyamu weMatisse edolobheni akuzange kube ngengozi. Umculi nomdwebi bathanda leli dolobha futhi lapha kuphela, ngokuvuma kwakhe, wajabula.
Insimu ye-museum yindlu eyakhiwe ngekhulu le-17 emagqumeni aseNice enombono omuhle womuzi. Emnyuziyamu weMatisse kunezithombe ezingaphezu kuka-200. Kuzo kungenzeka ukulandelela ukuthuthukiswa nokuthuthukiswa kwekhono lomlobi ngokwakhe. Futhi izivakashi zingabona izithombe ezingaphezu kuka-70, ezenziwe nguHenry Matisse.
I-Museum of Fine Arts e-Nice
Abalandeli bezithombe ngokukhethekile njenge-Museum of Fine Arts, abaqoqa emisebenzini yakhe yeqoqo imisebenzi yabaculi nabadwebi bekhulu le-XV-XX.
Isakhiwo ngokwalo kwakuyiyona ndawo yaseChristmas Kochubei kanye nezindiza ezinethezeka zahlelwa ensimini yayo. Namuhla, ingxenye ebalulekile yomhlobiso omuhle walezo zinsuku ayikho, ngaleyo ndlela ingaphazamisi ukunakekelwa into enkulu - imisebenzi yabadali. Ukuqoqwa kwemisebenzi yobuciko, okuvela kuzo izivakashi, ekuqaleni kwaqala ukuba khona njengezipho ezivela kubathelisi abazimele. Imisebenzi yabadwebi yayinikelwa emnyuziyamu kaNapoleon III ngokwakhe. Namuhla, ungabona izithelo zemisebenzi kaPicasso, Shere, Vanloo, Monet, Degas, Rodin nabanye abaculi abaningi nabadwebi bomhlaba jikelele.
I-Cathedral yaseSt. Nicholas e-Nice
I-St. Nicholas Cathedral e-Nice kufanele ihlonishwe izivakashi zedolobha. Akuyona nje isonto laseRussia lama-Orthodox e-Nice, kodwa futhi liyisinye sezikhumbuzo eziyigugu zesimo esingokomoya ngaphandle kweRussia ngokwayo.
I-cathedral yahlukaniswa ngo-1912. Amakhosi angcono kakhulu eRussia naseYurophu asebenza efenisha yakhe nemininingwane. Ingxenye yemininingwane yesigcawu kanye nokuhlobisa kwangaphakathi kwe-cathedral imelelwe imidwebo yemabula. Umuzi wokwakhiwa kweCathhedral yaseSt. Nicholas ukhethwanga hhayi ngengozi, ngoba i-Nice ngesikhathi sokubusa kwakuyindawo evelele yamaholide aseRussia.
Yini enye ongayibona e-Nice nasezindaweni ezizungezile?
Nice - lena idolobha elihle, eligcoba emahlathini. Imvelo yayo ngezitshalo ezingavamile kanye namagugu amasiko acebile kuphela kuqinisa umbono omuhle wabaholi bamaholide ngalesi sikhonkwane seFrance Riviera. Phakathi kwezinto ezithakazelisayo zaseNix nasezindaweni ezizungezile ungaphawula i-villa Ephrussi de Rothschild neGrimaldi Castle. Zombili izizinda zitholakala ezindaweni ezivela lapho ongakujabulela khona ukubukwa okumangalisayo kokuzungezile kwe-Nice. Umbono ungeziwe ezindizeni ezinhle kakhulu, eziphukile endaweni yabo.
Abathandi bezobuciko, ngaphezu kwalezi zinyuziyamu, kufanele uvakashele i-Museum of Art Modern ne-National Museum Fernand Leger. Yebo, uma ukuzijabulisa kungenasici kuwe, ukuvakashela emanzini amakhulu kunawo wonke eYurophu , eMarineland, nasemasimini aseMonaco nase-Eze, ensimini yawo izinhlobo eziningi zezitshalo ezingavamile, ziyoba ezithakazelisayo.
Isonto Lokuzalwa kukaJesu eBetlehema
Indlela yokwenza ipasipoti ngokusebenzisa i-Intanethi?
Izindawo zokuhlala zaseGeorgia olwandle
I-Mogilev - izivakashi ezikhangayo
Uzoya kuphi ePrague?
Izindlu ezingavamile kakhulu emhlabeni
I-Cuba - isimo sezulu ngenyanga
Izindawo ezinhle zase-Ukraine
Izindawo zokubhuka ze-Ski eJalimane
Yini ongayibona ku-Yaroslavl ngosuku olulodwa?
Ushintshe isimo sokuqaphela
I-Tile isitayela se-Provence
Intambo kabili ngezintambo zomlomo
U-Goldie Hawn noKurt Russell ngemvume yabo "bazoshada" eHollywood
U-Shakira wakhuluma nge "ubuhlobo" bakhe nogwayi
Khumula kusuka ezindaweni zekhofi ekhaya
Inkukhu fillet in sauce amakhowe
UGiselle Bundchen waphuma enkundleni yemitha engu-150, evula ama-Olimpiki eRio
Imihlobiso yezintombi ezingcono kakhulu
Imidlalo yamantombazane - amapuzzli
Ungabuqinisa kanjani emuva?
Izitayela eziningana zomshado
Ingane ine-leukocyte egazini
Umgede Krizna Jama
Ukukhubazeka kwe-Ovarian - Izimpawu
Iyini i-liturgy esontweni?
Yini ongayidla ukudla kwasekuseni lapho ulahlekelwa isisindo?
Ukudubula kwesithombe sonyaka omusha womndeni